Hamro Kantipur | संसद विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामाथिको फैसला कहिले? संसद विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामाथिको फैसला कहिले?
संसद विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामाथिको फैसला कहिले?
काठमाडौं, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिट निवेदनको पक्ष–विपक्षमा शुक्रबारदेखि बहस सकिएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकार र निवेदकका वकिललाई फागुन १० गतेभित्र ‘बहस नोट’ पेस गर्न आदेश दिएको छ।
त्यसपछि सर्वसम्मत रायका आधारमा वा मतैक्य हुन नसकेको स्थितिमा बहुमतका आधारमा विघटन विवादको टुंगोमा पुगिने आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा खबर छ ।